Kazakhstan: Miresaka Momba Ireo Sangany Ara-politika sy ny Toekarena Ny Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan: Miresaka Momba Ireo Sangany Ara-politika sy ny Toekarena Ny Bilaogera
Voadika ny 09 Avrily 2018 16:13 GMT
(Lahatsoratra nivoaka folo taona lasa izay: Avril 2008)
Mbola mitoetra ho lohahevitra mafana eo amin'ny tontolom-bilaogy Kazakhstani ny ady anatiny ifanaovan'ny samy sangany sy ny ady amin'ny kolikoly, saingy mahatonga ny bilaogera hitatitra ao anatiny resadresany ny fanahiana krizin'ny sakafo manerana izao tontolo izao sy ny fiantraikany amin'i Azia Afovoany.
Ehot hoe ho tahaka ny ahoana moa izany i Kazakhstan rehefa mamely mafy ny faritra ity tsy fahampian'ny sakafo ity ary mamela marika izany ety ivelany amin'ny fotoana saropady tahaka izao.
“elites – including ardent oppositionists – will leave the country with everything what can be taken out, and leave the nation to the mercy of fate”.
handao ny firenena miaraka amin'ny zavatra rehetra azony bataina ireo sangany ireo – ary ao anatin'izany ny mpanohitra – ary ho avelany ho eo am-pelatanan'ny lahatra ny firenena.
Araka ny fanombanana ataon'ny manampahaizana manokana, mety hitarika amin'ny fitomboana avy roa heny amin'ny vidiny ao anatin'ny dimy taona ny fiharatsian'izany olana ara-tsakafo izany. Manoratra i Epolet fa amin'ny toe-javatra tahaka izany dia voajanahary ho an'ireo mpihary harena ao amin'ny firenena ny manatodika ny masony any amin'ny fomba hahazoam-bola avy amin'ny sakafo :
Current credit crunch in Kazakhstan will force the domestic entrepreneurs to turn away from real estate sector and embrace lucrative agribusiness – the time of cheap food has gone.
Hanery ny mpihary harena eto an-toerana hiala amin'ny sehatry ny fivarotana trano aman-tany ny katrokatronifin'ny fitrosana eto Kazakhstan ka hidirany amin'ny tontolo hahazoam-bola amin'ny fambolena – lasa ny fotoana fahamoran'ny sakafo.
Ankoatra ny fanahiana tsy fahampian'ny sakafo, mampanahy be ihany koa ao Kazakhstan ny tsy fisian'ny herinaratra sy ny angovo. Zara raha nahavita volana ny angovo ao amin'ny firenena ary hiaritra tsy fahampian'angovo 200 megawatt ny firenena amin'ny mihintsan-dravina-ririnina ho avy, hoy i Zhanna tao amin'ny neweurasia. Nandray fepetra maromaro ny governemanta, anisan'izany ny fanavaozana ireo tambajotran’ herinaratra efa misy, fanamboarana haingana fotodrafitrasa vaovao sy fanovàna lalàna mba handrisihana fampiasam-bola eo amin'ity sehatry ity, izay mbola miankina amin'ireo mpifanolo-bodirindrina, tahaka an'i Ozbékistan sy ny etona voajanahariny. Mikasika izany, mahaliana fa tamin'ny herinandro lasa teo, izay mahasaro-piaro fatratra an'i Islam Karimov filohan'i Ozbékistan amin'ny fitariham-paritra – ny nitsipahany mafy dia mafy ny hevitra hampijoroana ny Firaisan'i Azia Afovoany navoakan'ny mpitarika kazakh.
Mandritra izany fotoana izany ny fanjakana manohy manitatra ireo faritra ara-stratejikan'ny toe-karem-pirenena. Mitatitra i Alim-atenbek fa nanaiky hivarotra ny 50 isanjaton'ny renivola amin'ny mpitrandraka arintany roa any Kazakhstan amin'ny vidiny $345 tapitrisa amin'ny Samruk Holding, vondron'orinasa iray an'ny fanjakana Kazakh, ny Rusal, ny mpamokatra viraty lehibe indrindra eto ambonin'ny tany avy any Rosia. Nanamarika kosa i Zhanna fa nandrahona indray an'i Chevron, orinasan'i Etazonia mitrandraka solika, hampandoa azy onitra $309 tapitrisa noho ny filazana fa fanitsakitsahana ara-tontolo iainana ny governemantan'i Kazakhstan.
Nanoratra izy hoe :
“Although in most cases these charges do have enough grounds, sometimes ecology-wise claims are imposed as a pressure tool to sway the foreigners, like in the case of Agip and Kashagan”,
“Na dia manana ny antony ampy aza ny ankamaroan'ny tranga, indraindray apetraka toy ny fitaovana fanerena mba hitaomana ireo vahiny, tahaka ny mahazo an'i Agip sy Kashgan ireo fitakiana ara-tontolo iainana ireo.